အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ရခြင်းအတွက် ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက် ၇ ချက်
Home Uncategorized အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ရခြင်းအတွက် ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက် ၇ ချက်
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို ပိုပြီးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖို့အတွက် သတ္တလောကသားအားလုံး ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို မေးကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အဖြေကို ဖြေကြမှာပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ သက်ရှိတွေအားလုံးရဲ့ အရေးပါတဲ့ ရည်မှန်းချက်တခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံရှိမှ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်မှာမို့ ပိုက်ဆံအများကြီးရှိချင်တယ်။ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ လူတွေနဲ့အတူတူရှိနေမှ ပျော်ရွှင်ရမှာမို့ အတူတူရှိနေချင်တယ်။ ကိုယ့်ကို အကောက်ကြံဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူတွေကို ပြန်ကလဲ့စားချေနိုင်မှ ပျော်ရွှင်ရမှာမို့ ပြန်ပြီးကလဲ့စားချေချင်တယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရဖို့အတွက် လောဘတွေကို သတ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းဘဲနေချင်တယ်
အစရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုကိုဘဲ ဦးတည်နေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားတတ်ဖို့ဆိုရာမှာ နည်းလမ်းလေးတွေကို သိရှိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတာတောင်မှာ လက်ထဲ သံပုရာသီး ထည့်ပေးပြီး ရှောက်သီးဖျော်ရည် ဖျော်ခိုင်းနေရင်တော့ အဲဒီဘဝဆိုတာကြီးကို ဖင်ပိတ်ကန်ပစ်ရပါမယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရေးပါမှုကို သိရှိသွားနိုင်လောက်ပြီမို့ ပျော်ရွှင်ဖို့ကို ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
သင့်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ? ဒီရိုးရှင်းတဲ့ မေးခွန်းလေးနဲ့ သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို စတင်တူးဖော်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ ဘဝအနေအထားဘယ်လောက်ဘဲ ဆိုးရွားနေပါစေ သင့်ကို ခြွင်းချက်မရှိချစ်တဲ့သူ တယောက်တော့ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ သင့်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေဟာ သင်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတာမျိုးကို မြင်တွေ့ချင်ကြလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအတွက် ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာက သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေစေပါလိမ့်မယ်။
တဒင်္ဂအပြောင်းအလဲလေးကို သတိထားလိုက်တာနဲ့ တဘဝလုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်
ဘဝဆိုတာကြီးက ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်ခဲပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဲ ကျနော်တို့ တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးကို ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်တကြီးကြိုးစားထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ ချစ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကြိုပြီးမမြင်နိုင်တဲ့ အနာဂတ်တွေကို ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း ပျော်ရွှင်ဖို့ကို မေ့လျော်မနေဖို့ လိုပါတယ်။ ယခုလက်ရှိအချိန်ကာလမှာလည်း ပျော်ရွှင်စွာနေဖို့အတွက် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူတွေဟာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်နဲ့ ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ရှိပါတယ်
အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူတွေက အရာရာကိုငြီးငြူပြီး စိတ်ပျက်နေတတ်တဲ့ သူတွေထက် ပိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းမရနိုင်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း စိတ်ပျက်နေတဲ့ စကားတွေပြောပြီး ငြီးငြူနေတတ်တဲ့ သူကို အခြားသောလူတွေကလည်း မနှစ်သက်ကြသလို လိုအပ်နေတဲ့ အကြံဉာဏ်နဲ့ အကူအညီတွေကို ပေးဖို့လည်း တွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ထားပြီး ငြီးငြူးမနေဘဲ ဖြစ်လာသမျှကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့စိတ်ကို မွေးမြူတာက ဘဝအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာကြီးမှာ ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ လူတွေကို လိုအပ်နေပါတယ်
လူသားတွေရဲ့ နေ့စဉ်ရှင်သန်မှုတွေဟာ သတင်းဆိုးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေ၊ အစာရေစာခေါင်းပါးမှုတွေ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေနဲ့ ကပ်ရောဂါဘေးတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအနေအထားတွေကို တတိတိဖျက်စီးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်တွေကို စိတ်သက်သာရဖို့နဲ့ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့သူတွေကို အများအပြားလိုအပ်နေပါတယ်။ နေပျော်စရာလောကကြီးဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူတွေသာ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လောက်ဘဲ နေမကောင်းဖြစ်နေပါစေ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံတွေ့နေရပါစေ၊ မပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့လုံးပန်းနေရပါစေ၊ အသက်ရှင်သန်နေသေးတဲ့အတွက် အရာရာကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးသောနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင် အသက်ရှင်သန်နေသေးတဲ့အတွက် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူ အချိန်ဖြုန်းခွင့်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လောက်ဘဲခက်ခဲပင်ပန်းနေပါစေ အသက်ရှင်သန်ရခြင်းကို မစွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသက်ရှင်သန်နေမှသာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖန်တီးလို့ရနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့လူတွေဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်တတ်ကြပါတယ်
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအရ အိမ်ထောင်သည်အများစုဟာ တကိုယ်တည်းသမားတွေထက် ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုမိုခံစားကြရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုမိုခံစားခွင့်ရနိုင်ဖို့ လက်ထပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တခုရယ်၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရယ်၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်ရတဲ့သူတယောက်လောက်ရှိနေတာက ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူတာကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသနပြုချက်များအရ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဟာ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကို မရရှိတဲ့သူတွေဟာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရခြင်းကို အလဟသဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ခြင်း၊ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ဘဲ စိတ်ထင်သလိုနေထိုင်ခြင်း၊ အစားအစာနဲ့ မူးယစ်သောက်စားမှုတွေကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲတတ်ခြင်း အစရှိတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်တတ်ကြတာမို့ စောစီးစွာသေဆုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ သက်တမ်းတလျောက်မှာ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်တတ်ဖို့နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous articleဒီမိုကရေစီအခြေခံသော မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်မလဲ?
Next articleပျက်စီးယိုယွင်းနေသောကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ လက္ခဏာ( ၁၂ )ချက်